भुन्टी र कान्छी सिरियलमा सधै देखिने भएपछि बिरामी अनिता खड्का यस्तो भन्छिन….(भिडियो सहित) - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / भुन्टी र कान्छी सिरियलमा सधै देखिने भएपछि बिरामी अनिता खड्का यस्तो भन्छिन….(भिडियो सहित)
भुन्टी र कान्छी सिरियलमा सधै देखिने भएपछि बिरामी अनिता खड्का यस्तो भन्छिन….(भिडियो सहित)
पछिल्लो समय विनोद खडका र अनिता खडकाको जोडीलाई नचिन्ने सायदै कम होलान् । यो जोडी अहिले समाजिक सन्जालमा भाइरल छ। टिकटकबाट भा’इरल भएको यो जोडीको वास्तविकता निकै नै मा’र्मिक र आत्मियताले भरिएको छ । यो जोडी नेपालकै एउटा नमूना जोडीको रुपमा चिनिएको छ । कुनैसमय अनिताको शरीरको तौल घटेर २७ किलोसम्म पुगेको थियो । अहिले पछिल्लो समय अनिताको स्वास्थमा निकै नै सुधार आएको छ ।
श्रिमान बिनोद खडका पहिलोपटक नै थियो यसरी रो’एको ,अनिताको सु-स्वास्थ्यका लागि उनले आफ्ना आशुहरुलाई लुकाउनै सकेका थिएनन् । पछिल्लो समय अनिता खड्काको स्वास्थमा एकदमै क्र’मिक सुधार देखिएको छ । अस्पतालमा अनिताको राम्रो हेरचाह र स्याहारसुसार गरेर आमाजु दिदी बसेकि छिन् । बिनोद पनि कहिलेकाही मात्रै आउन पाउँछन् किनकि काम जो उनले गर्नुपर्छ र कामसगै अनिताको उपचारका लागि खर्च जु’टाउने जिम्मा जो उनको काधमा छ ।
उनी अनितालाई बेला बेला हेर्न आउँछन् अनि उनी आएसगै अनितालाई खुसि राख्ने हर प्रयत्न गर्छन् र अन्तत जाने दिन आइ हाल्छ अनि फेरि छु’टिन जो गाह्रो हुन्छ । अनिताको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भैरहेको छ । उनी अहिले आफ्नै तबरमा उठ्न र बस्नसम्म सक्ने भएकि छिन् । भगवान् जस्ता श्रिमानले कहिले अनितालाई सगसगै एक्सर्साइज गराउछन् त कहिले हातगोडा मा’लिस गर्दिन्छन् त कहिले विलचेयरमा बाहिरिफेर डु’लाउछन् । अनितालाई खुसि र स्वास्थ्य राख्न उनि हर ढंगबाट प्रयत्न गर्छन् त्यसैले होला अनिले अनिता आफै उठ्न सक्ने सम्म भएकि छिन् ।